5 Reasons The Lord of the Rings သည် Gamers အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး Fantasy Franchise ဖြစ်သည် | Androidsis
Ignacio Sala | 24/11/2021 13:30 | အဆင့်မြှင့်တင် 24/11/2021 15:40 | Android ဂိမ်းများ
မူရင်းထုတ်ဝေပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်ကြာသောအခါ JRR Tolkien ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရုပ်ပုံကားချပ် - The Lord of the Rings trilogy သည် မော်ဒယ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအားလုံးကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ နောက်ပိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးကြား ရုန်းကန်ရတယ်။
စာရေးသူက ဆောက်တယ်။ သက်ရှိနှင့်တက်ကြွသောကမ္ဘာ လူမျိုး၊ စရိုက်နှင့် နေရာတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းကြောင်း ထင်ရှားသော ရှုပ်ထွေးမှုများ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ စာအုပ်များ၏ မှော်ဆန်မှုကို ဖမ်းယူရန် မဖြစ်နိုင်ဟု လူအများက ထင်နေကြသော်လည်း၊
အနှစ်နှစ်ဆယ်အကြာတွင် ပထမအပိုင်းကို စတင်ပြသခဲ့သည်။ Peter Jackson ၏ trilogy မှ၊ ဂိမ်း developer များသည် PC၊ consoles နှင့် mobile အတွက် Lord of the Rings universe ၏ ဒါရိုက်တာ၏ အမြင်ကို ဆက်လက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
အတိအကျပြောရလျှင် ဤနောက်ဆုံးပလပ်ဖောင်းတွင် ၎င်းကို လအနည်းငယ်ကြာအောင် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ် JR Tolkien ၏ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်လက်ရာ- The Lord of the Rings: War မှ ယနေ့အထိ ထွက်ရှိလာခဲ့သည်။
The Fellowship of the Ring ၏ ပြဇာတ်ရုံတွင် ထွက်ရှိလာမည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ Tolkien ၏ ဂန္တဝင် trilogy သည် အဘယ့်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ပါ၀င်မှု ပါ၀င်မှု ပါ၀င်နေဆဲဖြစ်သည်။
1 မျိုးဆက်သစ်စာရေးဆရာများကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
3 အထင်ကရ ဇာတ်ကောင်များ
5 Middle Earth ကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားနိုင်ပါတယ်။
JRR Tolkien ၏ဝတ္ထုများသည် သမိုင်းတွင် အတုယူအခံရဆုံးနှင့် အမျိုးအစားအလိုက် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်လာခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း Peter Jackson သည် စီးရီးအား အလွန်အောင်မြင်သော ရုပ်ရှင် trilogy အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ ဟောလီးဝုဒ် အကယ်ဒမီမှ အော်စကာ ၁၇ ဆု ရရှိခဲ့သည်။ရုပ်ထု ၁၁ လုံးဖြင့် ချီးမြှင့်မှု အများဆုံး ဘုရင် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည်။
Trilogy ၏အရွယ်အစား၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကြီးမားသောဒဏ္ဍာရီများသည် The Lord of the Rings ဟုလူများစွာက ယူဆခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။သို့သော် Tolkien ၏ လက်ရာကို နှစ်ရှည်လများ နှစ်သက်သူ နယူးဇီလန် ဒါရိုက်တာသည် သူ၏ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဝတ္ထုများကဲ့သို့ မကြာမီ နှစ်သက်လာခဲ့သည့် ရင်းမြစ်အကြောင်းအရာကို နှစ်သက်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်တွေ သြဇာတိက္ကမ နီးပါးဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေလိုပါပဲ။
ဝတ္ထုများ၏ အထင်ကြီးလောက်စရာ အတိုင်းအတာကို ဖမ်းစားနိုင်သည့်အပြင်၊ Jackson (နှင့် သူ၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသော Fran Walsh နှင့် Philippa Boyens) တို့သည် အခက်အခဲများကြားမှ အဆိုးဘက်သို့ အောင်ပွဲခံသည့် Tolkien ၏ Themes များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ The Lord of the Rings သည် အလွန်တော်သည်ဟု နားလည်ထားကြသည်။ အက်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းအဖြစ် မျှော်လင့်ချက်၏ ဇာတ်လမ်း။
Peter Jackson ၏ Lord of the Rings trilogy သည် လုံးဝအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခဲ့သည်။ Visual Effects တိုးတက်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။ XNUMX ရာစု၏အရုဏ်ဦး၌။
နောက်ဆုံးပေါ် CGI နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ Middle-earth ၏ စစ်ပွဲများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင် ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် လက်တွေ့ကျပါစေ။; လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်ကပင်၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စစ်သည်တော်များနှင့်အတူ ဤအထင်ကြီးစရာကောင်းသော ဖြစ်စဉ်များသည် မဖြစ်နိုင်ပေ။
Jackson ရုပ်ရှင်များသည် One Ring ကိုဖျက်စီးရန်ရန်သူမျဉ်းနောက်ကွယ်မှ Frodo နှင့် Sam တို့၏တာဝန်ကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံသော်လည်း၎င်းသည် Helm's Deep နှင့် Pelennor Fields တွင်ကြီးမားသောတိုက်ပွဲများဖြစ်သည်။ သူတို့က Middle-earth မှာ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ပေးတယ်။
အမှန်တော့၊ orcs၊ oliphants နှင့် wraths တို့သည် Tolkien ၏သူရဲကောင်းများကိုတိုက်ခိုက်သည့်စစ်မြေပြင်သို့ဝင်ရောက်သောအခါ၊ အဝေးကိုကြည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တခြားဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်.
Sauron ထံမှ Middle-earth ကိုကယ်တင်ရန် epic quest သည် အိမ်ဟုခေါ်သော ဇာတ်ကောင်များကို ဂရုမစိုက်ပါက ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Tolkien ၏ကမ္ဘာဖြစ်သည်။ အမှတ်ရစရာ ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသည်။ ၎င်းတို့သည် One Ring ကဲ့သို့ ဇာတ်လမ်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်တည်လာကာ ၎င်းတို့၏ အိုင်ကွန်များ ဖြစ်လာသည်။
Shire မှထွက်ခွာသွားသော Hobbits လေးကောင်မှ Aragorn၊ Legolas၊ Gimli၊ Boromir နှင့် Gandalf - ဤလူသားများ၊ elves၊ dwarves နှင့် wizards တစ်ခုချင်းစီမှာ ဇာတ်လမ်းကို ပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက် ထူးခြားတဲ့ အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။မိမိနတ်ဆိုးများကို အောင်နိုင်စေသကဲ့သို့၊
The Lord of the Rings တွင်လည်း၊ ဇာတ်ပို့တွေတောင် - Éowyn နှင့် Faramir ကဲ့သို့ - Middle-earth ၏ကံကြမ္မာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
New Line Cinema သည် Peter Jackson ၏ ရုပ်ရှင် trilogy ကို မီးစိမ်းပြလိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် မကြုံစဖူးသော ခြေတစ်လှမ်းကို တက်လှမ်းခဲ့သည်။ ပေးပို့မှု သုံးခုကို ဆက်တိုက် လှိမ့်ပါ။. ၎င်း၏ဇာတိနယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လည်း ရိုက်ကူးခွင့်ပေးခဲ့သည်၊ နိုင်ငံ၏ထူးခြားပြီး မထိမခိုက်နိုင်သောရှုခင်းများသည် Middle-earth အတွက် ပြီးပြည့်စုံသောအစားထိုးမှုဖြစ်လာသောအခါတွင် စိတ်အားတက်ကြွစေသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Jackson ၏လက်ထဲတွင်၊ Tolkien ၏စိတ်ကူးယဉ်စကြာဝဠာသည် သက်ရှိ၊ အသက်ရှုကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းများသည် Rohan လွင်ပြင်များကိုစီးခြင်း၊ အုံ့ဆိုင်းနေသောတောင်များကိုဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Mordor မီးတောင်သဲကန္တာရများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ ဤအဓိကနေရာများ ထိတွေ့နိုင်သော သို့မဟုတ် ခံစားနိုင်သော မြင်သာထင်သာရှိသော နေရာများကဲ့သို့ ထင်ရသည်။
Middle Earth ကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဒီဇင်ဘာ The Fellowship of the Ring ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရောက်ရှိခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည် -The Two Towers နှင့် The Return of the King တို့ကို 2002 နှင့် 2003 တွင် အသီးသီးထွက်ရှိထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ Middle-earth သည် အံ့မခန်းခရီးဆုံးနေရာအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
တရားဝင်လိုင်စင်ရ မိုဘိုင်းဖုန်း franchise ၏နောက်ဆုံးအရစ်ကျဖြစ်သော The Lord of the Rings: War တွင်၊ သင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည် Tolkien ၏ စကြာဝဠာကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။သင်၏စစ်တပ်ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အင်အားအရှိဆုံး အင်အားစုများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းသကဲ့သို့၊
မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ elves၊ orcs၊ dwarves၊ hobbits ထို့အပြင်၊ သင့်နယ်မြေကို လမ်းညွှန်ရန်အတွက် ရုပ်ရှင်များ၏ တပ်မှူးကြီးများကို စုဆောင်းကာ ကျော်ကြားသော Tolkien ၏ ကမ္ဘာမှတဆင့် သင့်နယ်မြေကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
သို့သော် သင်၏အရင်းအမြစ်များကို သင်မည်သို့အသုံးပြုမည် သို့မဟုတ် အခြားကစားသမားများနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့မည်နည်း။ သင် ... လုပ်ပါသလားကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းမှု၏ တွန်းအားဖြင့် သင် ဘက်လိုက်မည်လား။ Lord of the Rings: War ဂိမ်းတွင် အရာအားလုံးသည် သင့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာရနိုင်သည် အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး, Google Play စ y Galaxy စတိုးသင့်အတွက် ဃအခမဲ့ download လုပ်ပါ နှင့် In-app ကိုဝယ်ယူမှုတို့ပါဝင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » The Lord of the Rings သည် ဂိမ်းကစားသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး စိတ်ကူးယဉ် franchise ဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်း5ခု